COVID-19, laguma samayn shaybaadh. Falanqaynta hidda-socodka waxay muujinaysaa inuu ku Yimi si Dabiici ah - #1Araweelo News Network | #1Araweelo News Network
Saynisyahannadu si dhab ah ayay u qaateen fikradaha shirqoolka ee ku saabsan asalka SARS-CoV-2, wayna ka faa’idaysteen
Baadhitaanka Coronavirus ee ku wareegsan adduunka waxaa keena fayris dabiici ah, oo aan lagu samayn sheybaadh, daraasad cusub ayaa leh.
New Orleans(ANN)- Khubarada dhanka Sayniska ee Jaamacad ku taal dalka Maraynka oo kaashanaysa Saynisyahanada ku xeel-dheer baadhitaanada Cudurada ee ay ku midaysan yihiin Ururka Saynisyahanada Maraykanka, ayaa hadda meesha meesha ka saaray Cudurka Coronavirsu yahay wax bina’aadam sameeyay.
Daraasad cusub Dr. Andersen, oo ah cilmi baadhe cudurka faafa ee Machadka Daraasaadka ee Scripps ee La Jolla, Calif., ayaa ku sheegay daraasada in hidda-socodka ee fayriska uu muujinayo in SARS-CoV-2, aannu ahayn wax la mid ah fayrisyada loo yaqaan, sida la fili karo haddii ay ahaan lahayd insaanka, waxay leedahay astaamo aan caadi ahayn oo dhawaan lagu aqoonsaday qulqulatooyinka suuxinta ee loo yaqaan ‘pangolins’, taasoo caddeyn u ah in fayrasku ka yimid dabeecadda, Kristian Andersen iyo asxaabtiisuba waxay soo tebiyeen 17-kii Maarso daawada Nature Medicine.
Markii Andersen, oo ah cilmi baadhe cudurka faafa ee Machadka Daraasaadka ee Scripps ee La Jolla, Calif., Uu markii ugu horreeyay maqlay in coronavirus-ka uu ku faafayo Shiinaha, wuxuu isweydiiyay halka fayrasku ka yimid. Markii hore cilmi baadhayaashu waxay moodayeen in fayriska lagu faafiyo jeermisyo soo noq-noqda oo ka soo booda xayawaanka suuq badeedka cuntada Wuhan ee Shiinaha, si dhibaato loo gaysto bini’aadamka kadibna loo gudbiyo qof.
Hase yeeshee Fekredaa oo ahayd mid si weyn ay ugu doodayeen Khabiirada Cilmiga Sayniska ee Maraykanka iyo qaar ka mid ah kuwa galbeedka iyo Bariga, isla markaana labada dal ee Shiinaha iyo Maraykanka midba midka kale ku eedaynayay inuu sameeyay Fayriska dunida khal-khaliyay ee COVID-19, waxayna ku doodayeen,ama sheekooyinkaa ku falkinayeen cilmi-baadhayaasha kale ee soo jeedinayay in fayriska Coronavirus, COVID-19, ay u badan yahay inuu ka booday xayawaan keliya, kadibna hal qof u gudbay, sidaana uu ku faafay bini-aadamka tan iyo badhtamihii November.
Sidoo kale, waxyar ka dib markii muuqaalka hidde-side ee fayriska la muujiyay horraantii Janeaury 2020, warar xan ah ayaa soo baxayay oo sheegaya in laga yaabo in fayriska lagu farsameeyay shaybaar ama si ula kac ah ama shil ah lagu siidaayay.
Robert Garry, ayaa gebi ahaanba daaqada ka saaray doodaha iyo sheekooyinka ka imanayay in baddan oo ka mid ah Khubarada Sayniska, wuxuuna arrimahaa ku tilmaamay inay ahaayeen dhacdooyin nasiibdarro ah oo sii shiday khusuusiyaashii shirqoolka, ayuu yidhi Robert Garry, oo ku takhasusay cilmu-nafsiga jaamacadda Tulane ee New Orleans.
Machadka Wuhan ee Virology wuxuu “aad ugu dhowyahay” suuqa cunnada kalluunka, wuxuuna sameeyay baadhitaan ku saabsan fayriska, oo ay ku jiraan coronaviruse-ka, oo laga helay fiidmeerta awoodda u leh inay dadka ku keento cudur. “Taasi waxay dadka ku kaliftay inay taas ka fikiraan, bal, way baxsadeen oo waxay galeen bullaacado, ama qof ayaa ka baxay shaybaadhkiisii oo wuxuu tegey suuqa ama meel kale,” ayuu yidhi Garry oo warbixintiisa lagu daabacay Majalada (Science News) ay leeyihiin Bulshada Sayniska ee Maraykanka oo lagaga hadlo arrimaha sayniska, isla markaana ah Urur ka shaqeeya horrumarinta aqoonta Sayniska.
Siidaynta shilalka fayriska, oo ay kujirto SARS, waxay ka dhacday shaybaarro kale waqtiyadii la soo dhaafay. Sidaas awgeed – maahan wax la iska dhaafi karo. Taasi waxay noqon lahayd nacasnimo. ayuu yidhi
Wuxuu sheegay Khabiirkani in ku kalsoonaanta Saxaafadda lagu kalsoonaan karo ay ku timaaddo qiimayn, sidaa awgeed Saynisyahanada iyo saxafiyiintu ay wadaagaan aaminaada aasaasiga ee su’aalaha, indho indhaynta iyo xaqiijinta si loo gaadho runta, wuxuu xusay in Warbixinada Saynisku ay ka warbixiyaan cilmi-baadhis muhiim ah iyo daahfurka guud ahaan cilmiga Sayniska. Waxaan u baahanahay taageeradaada maaliyadeed si aan u gaadhno – tabaruc kasta ayaa isbedel sameeya. ayuu yidhi, Robert Garry.
Andersen wuxuu soo aruuriyay koox cilmiyaysan oo cilmiga noolaha iyo cilmiga nafsiga ah, oo uu ku jiro Garry, kuwaas oo ka kala yimi dalal dhowr ah si ay u falanqeeyaan fayriska tilmaamayaasha in la sameyn karo, ama uu ku koray oo si lama filaan ah looga soo saaray sheybaadhka.
” Waxa aannu nidhi, Aynu qaadanno fikradan oo ay ku jiraan noocyo badan oo kala geddisan, ama kala duwan, in Fayrisku asal ahaan aannu dabiici ahayn.., Waa fikrad halis ah, ayuu yidhi. Andersen.
La kulanka qaloocan iyo wadiiqooyin kale oo dalxiis ah, kadib cilmi-baadhayaashu waxay falanqeeyeen astaamaha hidde-wadaha fayriska COVID-19, ama siday isugu xiggaan, RNA, si loo helo tilmaamo ku saabsan asalkeeda.
Way cadahay dooda ku dhowaad habeen, ayaa laga dodayay in fayrisku aanu bina-aadam ahayn, ayuu yidhi. Qof walbana uu rajaynayo inuu abuuro fayris, balse uu u baahan doonno inuu la shaqeeyo fayris hore loo yiqiin oo injineer u yeesho guryaha uu doonnayo inuu dhiso, ama dhisaan.
Laakiin fayriska SARS-CoV-2, wuxuu leeyahay qaybo ka duwan kuwa fayrisyadii hore loo yiqiin, sidaa darteed waxay ahayd inay ka yimaadaan fayris aan la garanayn, ama fayris dabiici ah. Xogta hidda-socodka ayaa si aan macquul ahayn u muujisay in SARS-CoV-2, in aan laga soo qaadin wax laf-dhabarta virus hore loo adeegsaday, sidaa ayay Andersen ku shaaciyeen daraasadda.
“Kani ma aha fayris qof uu samayn lahaa oo wada tegi lahaa. Waxay leedahay astaamo badan oo aad u kala duwan, oo qaarkood ay ka soo horjeedaan, ayuu yidhi Garry. “Sidaas ma samayn doontid haddii aad isku deyeyso inaad samayso Fayris aad u xun.”
Khuburo kale oo ah Saynisyahano ayaa oggolaaday daraasada Andersen, Garry iyo saaxiibadooda kale shaaciyeen, Emma Hodcroft, oo ah cilmi-baadhe ku takhasusay cudurka noolaha oo ka tirsan Jaamacadda Basel ee Switzerland ayaa tidhi, “Waxaan u aragnaa gebi ahaanba wax caddeeyn ah oo ah in fayriska la soo saaray ama si ula kac ah loo sii daayay. Iyadu kama mid ahayn kooxda Andersen, laakiin waxay xubin ka tahay koox saynisyahano ah oo leh Ururka lagu magcaabo, (Nextstrain.org), kaas oo la socda isbeddelada hidaha ee yar-yar ee coronavirus si ay wax uga sii oggaato sida ay ugu faafayso adduunka oo dhan.
Qaabka Falanqaynta ballaadhan ee lagu ogaanayo, ayaa lagu faaqiday, laguna daabacay barta bioRxiv.org, ka hor dib u eegista, waxay sheegatay inay ka heshay cufnaanta HIV ee coronavirus, Hodcroft ayaa leh. Saynisyahano kale ayaa si dhakhso leh u tilmaamay cilado daraasad ku jirta oo qoraayaashu dib ayey uga laabteen warbixinta, laakiin ka hor intaanay sii darin fikirka ah in Coronavirus yahay mid uu sameeyay injineer, ama Bina’aadam.
Qaar ka mid ah noocyada hidde-sidaha ee fayriska, ayaa la mid ah HIV, laakiin taasi waa wax ka yimi fayrasyadaas oo ay wadaagaan awooweyaal caan ah xilligii horumarka, Hodcroft ayaa sidaa ku doodaya, isagoo leh. “Muhiimadooda sheegashadoodu waxay la mid ahayd aniga oo qaatay nuqul Odyssey ah oo aan idhaahdo, ‘Oh, tan ayaa leh erayga ku jira’, ka dibna furay buug kale, anigoo arkay ereyga ku dhex jira oo leh ‘Oh my gosh, waa isla ereyga, waa inuu jiraa qayb ka mid ah Odyssey buuggan kale, ”ayay tidhi. Waxay ahayd sheegasho runtii marin habaabin ah iyo runti saynis-xumo. ” ayay tidhi, Hodcroft.
Kooxda Andersen ayaa raadinaysaastaamo gaar ah, waxayna si ay u go’aamiso bal in haddii fayriska si lama filaan ah looga baahin lahaa shaybaadhka. “Taasi waa suurtagal macquul ah maxaa yeelay cilmi baadhayaal meelo badan ka shaqeeya waxay la shaqeeyaan ‘coronaviruses’ oo awood u leh inay ku faafiso bini’aadamka, ayuu yidhi. “Walxaha ayaa ka soo baxa sheybaadhka mararka qaar, badanaa had iyo jeer si shil ah,” ayuu yidhi.
Dhowr astaamood oo lama filaan ah oo ah fayriska COVID-19, ayaa qabtay indhaha cilmi-baadhayaasha, ayuu yidhi Andersen. Gaar ahaan, hidda-wadaha ku jira borotiinka laf-dhabarka ee coronavirus wuxuu leeyahay 12 baloogyo RNA, kuwaas oo dheeri ah, ama nucleotides, oo ku dhegan. Nucleotides-ka waxay sameeyaan unugyada qaab-dhismeedka hida-sidayaasha aasaasiga ah ee acids-ka nucleic-ka sida DNA.
Borotiinkan qanjidhada ayaa kasoo baxa dusha sare ee fayriska, wuxuuna u oggolaanayaa fayrisku inuu qabsado oo galo unugyada Aadamaha. Galintaas dhismayaasha RNA, waxay ku dartay afar (amino- acids) borotiinka, waxayna u samaysaa goob borotiin ah (enzyme) loogu yeedho, furin si loo gooyo. Furin waxaa lagu sameeyaa unugyada Aadanaha, waxayna nadiifisaa borotiinada keliya meelaha ay ku jiraan isku darka (amino- acids) gaar ah, sida midka loo abuuray galinta. SARS iyo fayrisyo kale oo la mid ah, SARS malaha goobahaa goynta ah.
Helitaanka goobta gogoldhigga laf-dhabarta waxay ahayd wax la yaab leh: “Waqtigaasi wuxuu ahaa daqiiqad aan caadi ahayn iyo daqiiqad haysay,” Garry ayaa sidaa ku dooday. “Marka fayraska hargabka shimbiraha ay helaan awoodda ay ku goyn karaan furin, fayrisku badanaa wuxuu noqdaa mid si fudud lagu kala qaadi karo. Gelinta ayaa sidoo kale abuuray meelo ay ka kooban tahay moleekuleyaasha sonkorta loogu dhejin lahaa borotiinka laf-dhabarta, abuurista gaashaan ka ilaaliyaha fayriska ee nidaamka difaaca.
Borotiinka ‘COVID-19’, borotiinka laf-dhabarta ayaa waliba si adag ugu xidhma borotiinka unugyada aadanaha ee loo yaqaan ACE2, marka loo eego SARS (SN: 3/10/20). Adkeynta adag waxay u oggolaan kartaa SARS-CoV-2, inay si fudud u qaadsiiso unugyada. Wadajir ahaan, astaamahaas ayaa laga yaabaa inay ku xisaabtami karaan sababta COVID-19 uu sidaas u faafayo, ayaa lagu yidhi, daraasada.
“Waa arrin aad u fiican, labadan qaab, ayuu yidhi Andersen. Sidee u sharaxnaa sida ay tani ku dhacday? Waa inaan daacad noqdaa Waxaan ka shakiyay [inay ahayd wax caadi ah]. Tani waxay ku dhacday dhaqanka unugyada ”sheybaadhka, halkaas oo fayrisku ka heli karo is beddelid xilli ay marar badan ku celcelinayaan weelka shaybaadhka. Dabeecadda, fayrisyada wata qaar ka mid ah kuwa is beddelladaas waxaa laga yaabaa in lagu xakameeyo xulashada dabiiciga ah, laakiin waxay ku adkaan kartaa suxuunta shaybaadhka halka xitaa fayrisyada daciifka ah annay u baahnayn inay si adag ugu dagaallamaan jiritaanka.
Laakiin markaa cilmi-baadhayaashu waxay isbarbar dhigeen SARS-CoV-2 iyo coronaviruses kale oo dhowaan laga helay dabiiciga, oo ay ku jiraan fiidmeerta iyo baangooyinka. “Waxay u egtahay in SARS-CoV-2 ay noqon karto iskudhafka fayriska baangiyada iyo pangolin,” ayuu yidhi Garry.
Gaar ahaan, pangolins sidoo kale waxay leeyihiin amino acids oo sababa isku xirnaanta adag ee borotiinka laf-dhabarka ACE2, kooxdii laga helay. – Sida muuqata si cad, tani waa wax ku dhici kara dabeecadda, ayuu yidhi. Waxaan u malaynayay inay muhiimad yar tahay, Waxay muujinaysaa ina aannay jirin wax qarsoon oo ku saabsan dadaalkeeda ku aaddan [protein] sababta oo ah pangolins ayaa sidoo kale sameeya.
Meelaha sonkorta lagu xidho ayaa tilmaan kale u ahaa, in fayrisku dabiici yahay, ayuu yidhi Andersen. Sonkortu waxay abuurtaa “gaashaanka loo yaqaan ‘mucin Shield’ oo ka ilaaliya fayriska weerarka nidaamka difaaca jirka. Laakiin suxuunta dhaqameed ee unugyada sheybaadhku ma laha nidaamyo difaac, taas oo aan suurtogal u ahayn in la waafajinta noocan ah ay ka soo baxdo kororka fayriska sheybaadhka. “Noocan sharraxa ah ayaa ka fog mala-awaalka cillad-dhaqameed iyo waxyaabaha shakiga abuuray” ayuu yidhi.
La mid ahaanshaha SARS-CoV-2 ee fayriska ‘bat iyo pangolin’ waa qaar ka mid ah caddaynta ugu wanaagsan in fayrisku dabiici yahay, ayuu yidhi Hodcroft. “Tani waxay ahayd xayawaan kale oo ku faafaya aadanaha,” ayay tidhi. Xaqiiqdii waa sharaxaad ugu sahlan waxa aan aragno. ” Baadhayaashu wali ma hubin sida saxda ah ee xayawaanku uu ahaa isha loo aanaynayay COVID-19.
Andersen wuxuu leeyahay falanqaynta malaha ma dhigi doonto fikradaha shirqoolka ee ahayd in Fayriskan Bani’aadam sameeyay in lagu nasiyo. Si kastaba ha ahaatee Andersen, wuxuu qabaa in falanqaynta ay mudan tahay in la qabto. – “Aniga naftayda ayaan ka shakisanaa bilowga, waxaana ku socday dib u gurasho, ayuu yidhi Andersen, laakiin hadda wuu ku qancay. Xogta oo dhami waxay muujisaa inay caadi tahay oo Fayriska yahay mid si Dabiici ah u yimi.
Dhinaca kale, Shi Zhengli oo ah aqoonyahan cilmiga ku xeel dheer oo u dhalatay Shiinaha, isla markaana ah qoraa, cilmi baadhe Machadka Wuhan ee Virology, oo qayb ka ah Akademiyada Sayniska Shiinaha, ayaa iyadu qabtay dood ka duwan tan saynisyahanada dunida intooda badan ee ahayd in Fayriska la sameeyay ama uu si uun uga baxay Shaybaadh, waxayna si cad u beenisay in machadka Wuhan yahay isha sababta u ahayd faafinta iyo kasoo baxay coronavirus-ka, waxayna ku tilmaantay Coronavirus inuu yahay wax “dabiiciga lagu ciqaabayo bini-aadamka”.
Laakiin doodda Shi Zhengli oo markii horre ay iska indha tireen khuburo badan, ayaa hadda u muuqata mid taageero weyn ka heshay dhanka Andersen iyo kooxdiisa daraasadda cusub ee ay soo saareen.